KwiDolophu yeCactus Cottage kwiPines yasePrescott - I-Airbnb
KwiDolophu yeCactus Cottage kwiPines yasePrescott
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguStephanie
Indawo yokuhlala enomtsalane kunye neyokuphumla yestudiyo kumgama wokuhamba ukuya ePrescott ezantsi kwedolophu kunye nesikwere senkundla. Uya kuyithanda indawo! Le gem ithokomeleyo ibekwe ngasemva kwenye yezona ndawo zindala zasePrescott kwindawo ezolileyo nefumaneka ngokufanelekileyo ngendlela engaphantsi kweemayile ukusuka kwimbali yeWhisky Row! Ukhululekile kwaye uxhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ulungele iimfuno zakho. Eli khaya lisanda kwakhiwa, labucala lingalala abantu abathathu, linekhitshi eligcweleyo kunye nebhafu, kunye neveranda entle yangaphambili. Ukuhamba ngokulula ukuya kwiindawo zokutyela kunye neevenkile!
Indlu ye studio esandula ukwakhiwa nazo zonke izinto eziluncedo! Ikwimayile enye ukusuka kwiNkundla yeNdlu yesikwere! Kukuhambo lwemizuzu emithathu okanye uhambo lwemizuzu eli-18 ukuya kwiWhisky Row yembali. ICactus Cottage yethu emnandi yakhiwe ngumnini uAron kwaye yenzelwe ukuba ikhululeke kwaye imema. Indawo yokungena yabucala kwaye ibekwe kwiipayini, eli khaya leendwendwe liqinisekile ukuba liyakwenza ukuhlala kwakho ePrescott kukhumbuleke!
5.0 · Izimvo eziyi-413
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi413
Ikhaya lethu kunye nendlu yeendwendwe ibekwe kude nePark Ave esisithili esiyimbali. Sicebisa iindwendwe ukuba zihambe ebumelwaneni. Izindlu ziyathandeka ukuzijonga. Kwakukho nomyezo wezilwanyana owawulapha ngowe-1904!
UStephanie noAaron bahlala kwindlu enkulu kwaye nangona sobabini sisebenza kukho umntu ofumanekayo wokuphendula imibuzo ngamaxesha amaninzi. Silusapho olunabantwana abancinci ngoko ke nceda ube nomonde ukuba asiphenduli kwangoko kodwa qiniseka ukuba siya kubuyela kuwe ngokukhawuleza kangangoko sinakho!
UStephanie noAaron bahlala kwindlu enkulu kwaye nangona sobabini sisebenza kukho umntu ofumanekayo wokuphendula imibuzo ngamaxesha amaninzi. Silusapho olunabantwana abancinci ngoko…